५० स्वर्णकाे अपेक्षा कतिकाे सार्थक, के सागमा इतिहास बदलिएला ? | | Neplays.com
By Neplays	 Last updated Nov 21, 2019
दक्षिण एशियाली देशका लागि साग प्रतियोगिता निकै चासोकासाथ हेरिन्छ । नेपालबाट सुरु भएको सागको १३ औं संस्करण सुरू हुन अब ११ दिन बाँकि छ । काठमाडाैं, पाेखरा, जनकपुरमा हुने सागका लागि नेपाली टोलीले यसपटक अहिलेसम्मकै धेरै स्वर्णकाे अपेक्षा गरेकाे छ । तर त्याे अपेक्षाा कतिकाे सार्थक हाेला, करीव ५० कराेडकाे तयारी खर्चले अर्धशतक स्वर्ण नेपालले जित्न सक्ला त ?
जति जति सागकाे मिती नजिकीदै छ, त्यति नै खेलाडीकाे तयारी बढिरहेकाे छ भने नेपालले कति पदक जित्ला भन्ने ठुलाे अपेक्षाा गर्न थालिएकाे छ । तेस्राे पटक घरेलु भूमीमा हुन लागेकाे सागमा खेलकुद पदाधिकारीले यसपटक कीर्तिमानी पदक जित्छ भन्ने भाषण गर्न सुरू गरिसकेका छन । तर उनीहरूकाे त्याे अपेक्षा कतिकाे सार्थक बन्ला भन्नेमा उनीहरू नै ढुक्क भने छैनन् ।
यसअघिकाे सागमा पनि तत्कालिन सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्टले नेपालले अहिलेसम्म कै धेरै स्वर्ण जित्ने दावी गरेका थिए । तर अाउने बेला जुन जुन खेलले स्वर्ण पदक साेचेका थिए, उनीहरू नै असफल भएका थिए । यसपटक पनि मुख्य गरि मार्सलअार्ट, बक्सिङ लगायतमा धेरै संभवना देखाएका छन । तर अन्तिममा हात्ती अायाे हात्ती अायाे फुस्सा नहाेला भन्न पनि सकिन्र ।
सन् १९८४ मा काठमाडौमा भएको पहिलो सागमा नेपालले पाँच खेलमा सहभागिता जनाउँदा चार वटामा नै स्वर्ण जितेको थियो । तर समय र खेल विधा बढदै जाँदा सातौं संस्करणसम्म नेपालको सागमा प्रदर्शन घट्दो क्रममा रह्यो । जव नेपालले आठौ संस्करण आयोजना गर्यो त्यो बेला सागका इतिहासमा अहिलेसम्मकै धेरै ३१ स्वर्ण हात पारेको थियो ।
त्यसबेला नेपाललाई धरै स्वर्ण तेक्वान्दो र करातेले दिलाएका थिए । जसमा यसपटक पनि तेक्वान्दो र कराते समावेश छन । सातौमा चार स्वर्णमा चित्त बुझाएको नेपाल आठौमा ३१ स्वर्ण जित्दा नेपाली खेलाडीको स्तर निकै बढेको भन्ने आभास पनि नभएको होइन । तर सो लयलाई त्यसपछिका तीन संस्करणमा नेपालले बचाउन सकेन । सागको इतिहासमा पहिलो पटक पदक तालिकामा दोस्रो बनेको नेपाल त्यसपछि चौथो र पाँचौमा नै चित्त बुझाउन बाध्य भयो । अघिल्लाे संस्करणमा नेपालले मात्र तीन स्वर्ण हात पार्याे । कुल ६० पदक जितेकाे नेपाल बरियतामा छैटाैं स्थानमा रह्याे ।
यसपटक घरेलु मूमीमा हुने सागमा नेपालबाट कुल ५ सय ९६ खेलाडीले सहभागिता जनाउँदैछन । जसमा २७ खेलमा ३ सय ९ पुरुष र २ सय ८४ महिला खेलाडी छन ।
अघिल्लाे संस्करणमा ७१८ जना खेलाडीले सहभागिता जनाउदा मात्र तीन वटा स्वर्ण जितेकाे नेपालले यसपटक के साच्चै ५० स्वर्ण हात पार्ला त ? सागमा अहिलेसम्म जति खेल समावेश भएपनि १० खेलले मात्र स्वर्ण जित्न सफल भएका छन् । त्यसमा यसपटक पहिलाे पटक सहभागिता गराइएकाे प्याराग्लाइडिङ नहुने जस्तै छ । यसपटक क्रिकेटमा पनि पदककाे संभावना रहेकाे छ ।